सबै भन्दा राम्रो ग्यास ट्रिमर समीक्षा के हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
सर्वश्रेष्ठ पेट्रोल ट्रिमरहरू, समीक्षाहरू के हो?
इन्टरनेटमा तपाईं ग्यास ट्रिमरहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन शीर्ष फाइदाहरूमा व्यवस्थित छन् सबै फाइदाहरू र नोक्सानहरूको विस्तृत विवरणको साथ।
तल २०१ 2016 को वर्तमान रेटिंग छ, दस ग्यास ट्रिमरहरू समावेश गर्दै।
निम्न ब्रान्डको ग्यास ट्रिमरहरूमा राम्रो समीक्षा:
STIHL FS 70. पेशेवरहरू: महिलाका लागि उपयुक्त, किनकि यो एकदम हल्का छ, तर शक्तिशाली छ।
SD MASTER BC-033। राम्रो बजेट विकल्प।
च्याम्पियन T333-2। धेरै शक्तिशाली
जोन्सरेड। विश्वसनीयता मा फरक छ। यसमा धेरै सुविधाहरू छन्।
Stihl FS 38. उपनगरीय क्षेत्रमा अपरिहार्य।
Huter GGT1000T। आर्थिक, राम्रो सेवा गर्दा।
यद्यपि यी ब्रान्डहरू बारे सब भन्दा सकारात्मक समीक्षा होईन: Huter GGT1000T, Leroy Merlin East BC260-D।
मैले प्रयोग गर्नुपर्ने सब भन्दा राम्रो पेट्रोल ट्रिमरहरू निश्चित रूपमा स्टिल (शान्त) ट्रिमरहरू थिए! यी उच्चतम गुणवत्ता, सुविधाजनक, लामो-प्ले र विश्वसनीय छन्। दोस्रो स्थानमा म हुस्क्वेरना ट्रिमरहरू राख्दछु, तर म व्यक्तिगत तवरले तिनीहरूलाई अधिक मनपर्दैन किनभने उच्च तौलको कारण। त्यसो भए अरू सबै।
यदि तपाईं एक विशिष्ट मोडल लिनुहुन्छ भने, म स्टिल एफएस -१ adv० लाई सल्लाह दिन्छु, यो एकाई पूर्णतया सन्तुलित छ, न्यून वजनको साथ स्वीकार्य शक्ति छ, र कान काट्दैन। केवल उसलाई चाहिने चीज भनेको कहिलेकाँहीमा भल्भहरू समायोजन गर्नु हो, किनकि ईन्जिन-स्ट्रोक हो। साथै, एफएस २ 130०, १ 4० भन्दा भारी भए पनि ठूलो शक्ति छ र तपाईंको सुनुवाई उच्च गतिमा काट्छ।
यदि तपाईं एक पेशेवर स्तर को एक राम्रो र उच्च-गुणवत्ता मोटर साइकल किन्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए यो स्टिल हो। यी वेणीहरू दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको days दिनहरू काम गर्न तयार छन्। र तिनीहरू सबै मोडमा मर्मत बिना यो मोडमा सेवा गर्दछन्। मैले आफैंलाई जाँचे, मलाई थाहा छ।
म के भन्न सक्छु, तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ र तपाईं आफैले सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ।
यदि तपाई मूल्य पछि हुनुहुन्छ भने, तब चिनियाँ साइट मा ग्यास थूक पाउनुहोस्। यदि तपाईं प्रत्येक मौसममा नयाँ एकको लागि भुक्तान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। हामीसँग मोटोकोसा कम्पनी स्टिल (शान्त) छ। हो, यो महँगो छ, तर हामी यससँग समस्याहरू जान्दैनौं। यो राम्रोसँग काट्छ, चलाउन सजिलो हुन्छ, repair बर्ष भन्दा बढि मर्मतको आवश्यकता पर्दैन। हामीले3350० डलरमा किनेका छौं।
सबै भन्दा राम्रो पेट्रोल ट्रिमरहरू ती हुन् जुन सस्तो छन् र विश्वसनीय र लामो समयको लागि काम गर्दछन्।
ट्रिमरहरूको बिक्रीको लागि साइटहरूमा, म प्रायः बेलारसियन मोडेलहरू भेट्टाउँछु; Vityazquot; र quot; Minskquot; - तिनीहरू सस्तोताको कारण एक बेस्टसेलरको रूपमा नियुक्त भए। यसबाहेक, तिनीहरू धेरै शक्तिशाली थिए - k किलोवाटबाट।
र यदि तपाईंले मूल्य लिनुभयो भने, त्यसो भए जर्मन वा जापानी ट्रिमरहरू लिनुहोस्, तर ती दश गुणा महँगो हुन्छन्।
अवश्य पनि, यदि तपाइँ एक ट्रिमर छनौट गर्नुहुन्छ, पेट्रोललाई प्राथमिकता दिन उत्तम हुन्छ। त्यसो भए, ब्रान्डको रूपमा, म व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई स्टिहलमा सल्लाह दिन सक्छु, अर्थात् मेरो ठाउँमा, स्टिल एफएस model 38 मोडेलमा।
म उनको बारेमा के भन्न सक्छु, हामी करिब twenty गुणा बीस एकर क्षेत्र को लागी एक मौसम को लागी घर कुलो काट्छौं र अपरेशनको बारेमा कुनै गुनासो छैन, सबै ठीक छ। एक नेटिभ ट्रिमर फिशिंग लाइन प्रयोग गर्दा, उपभोग मात्र मनपर्दो छ, हामीले चिनियाँ विकल्पहरूको प्रयास गर्‍यौं, लाइन खपत तुरुन्तै वृद्धि हुन्छ।
धेरै सहज र के महत्त्वपूर्ण छ, एक हल्का मोडल।
यदि तपाईं महँगो ब्रान्डहरू जस्तै मकिता, बॉश, होन्डाको पछि लाग्नुहुन्न (वैसे, यो सम्भव छैन कि उनीहरू TAMGEGDEEVSE पनि नहोस्!), त्यहाँ रूसीहरू मूल्य र गुणस्तरको उचित संयोजनको उदाहरणको रूपमा छन्!
प्रोटोन BT-3002 - समीक्षा
Rostec RT-494M व्यावसायिक - समीक्षा यहाँ
हो, निस्सन्देह यो इलेक्ट्रिक भन्दा ग्यास ट्रिमरहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हो। हामीले इल्यान्ड कम्पनी किनेका छौं। यो धेरै बर्ष देखि सामान्य काम गरीरहेको छ। कहिल्यै तोडिएको छैन। हामी घर मा सबै कुरा, छिमेकीहरु र आफन्तहरु, सबै खुशी छ।
62 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,294 प्रश्नहरू।